Nyochaa 14 Day Keto Challenge - Nwee ihu ọma
Home » Keto » Nyochaa 14 Day Keto Challenge
The Ụbọchị 14 Day Keto Challenge bụ a ọhụrụ nri plan kere site kasị mma na-ere akwụkwọ na CISSN gbaara edozi nutritionist Joel Marion. Ọ bụ otu n'ime usoro pụrụ iche kachasị sie ike na nri ị nwere ike ịchọta n'ịntanetị. Usoro nri ọhụrụ a ga - eme ka aru gị rụọ ọrụ ma mee ka ọ bụrụ igwe na - ere ọkụ n’izu abụọ. Atụmatụ ohuru a na-ebelata oriri carbohydrates na-abawanye ogo nke abụba enyi na enyi na ahụ mmadụ. N'ime atụmatụ ọhụrụ a ị ga-amụta maka otu pụrụ iche nke "abụba buru ibu" yana otu abụba ndị a ga - esi nyere gị aka ịwụfu pound karịrị otu ụbọchị dịka ụbọchị iri na anọ. Fọdụ n'ime nri ndị a na-akpọ "oke abụba" gụnyere ọkacha mmasị dịka anụ ezi, bọta, anụ na-acha uhie uhie, na nkochi ime akwa. Challengebọchị iri na anọ ọhụụ a enweghị ihe ọ bụla jikọrọ ya na Atkins ma ọ dịtụ iche na atụmatụ nri nri ketogenic.
Usoro nri keto ọdịnala na - eduga na nke ana - akpọ ketosis. Ketosis bụ ọnọdụ nke metabolic nke etoju nke ozu ketone na anụ ahụ. Site n'ibelata oke nri gị, ma dochie carbs ndị a na ụdị abụba enyi na enyi, nri keto ọdịnala ga-amanye ahụ gị ịmepụta ketones maka mmanụ nke na - enyere ahụ gị aka ịmị abụba maka ike. Na-ada ezigbo mma? Ọfọn enwere nnukwu ọghọm na nke a… na ọ bụ ihe ndị mmadụ na - amalite ichegbu onwe ha tupu ịmalite atụmatụ nri nri. A kpọrọ ya ọrịa Keto.
Kedu ihe bụ Keto Flu?
Ọrịa keto bụ okwu eji kọwaa ọrịa-yiri mgbaàmà ndị metụtara ịmalite atụmatụ nri nri dị ala nke ketogenic. Site na keto flu, mmadụ nwere ike ịnwe nsogbu siri ike gụnyere ehighị ụra, afọ ntachi, nsogbu nri, isi ọwụwa, ike ọgwụgwụ ahụ ike, na ụkọ ịnweta. Na Ụbọchị 14 Day Keto Challenge ị gaghị echegbu onwe gị banyere ịnagide ihe egwu dị na flu Keto. Uzo ozo di na nri ndi ozo bu na mgbe ufodu, o nwere ike iwe otu onwa tupu mmadu abanye ketosis. Ọ bụrụgodi na ọ bụ n'ihi ihe ụfọdụ, ahụ gị nwere ike ịbanye ketosis n'otu izu, ihe kachasị esemokwu na-abụghị keto flu bụ na usoro keto ọdịnala anaghị agbanwe agbanwe, ọ bụ ihe ezi uche na-adịghị na ya ịnọ n'ọnọdụ ketosis na-adịgide adịgide. E wezụga na ọ bụghị ihe ezi uche dị na ya, ọnọdụ ketosis na-adịgide adịgide adịghị mma maka ahụ gị ogologo oge.
14bọchị iri na anọ nke Keto ihe ịma aka nri bụ ihe kachasị mma maka nri keto ọdịnala. Ahụ gị ga-enwe ike ịmepụta ketones, ị gaghị agafe ketosis n'ezie. Eeh, i nuru nke oma… .e ka ga enweta ALL nke uru dị ịtụnanya nke ahụ gị na-eme ketones ENWEGHỊ n'ezie ịbụ ezigbo ketosis.
Na atụmatụ nri keto ọdịnala, metabolism ị nwere ike ịmalite nwayọ n'ime ụbọchị 7-10 n'ihi enweghị glucose iji ghara iri nri. Nke a ga - ebute nsogbu maka homonụ nke na - ahụ maka abụba na - ere ọkụ. Ngwọta nke nsogbu a gụnyere iri "keto carbs" n'oge kwesịrị ekwesị. A kpuchiri nke a n'ụzọ zuru ezu na atụmatụ 14 Day Keto Challenge nri! Site na atụmatụ nri a, ị ga-ekpughere eziokwu banyere etu "keto carbs" nwere ike isi guzozie & bulie homonụ gị ka ọ ghara ibu ibu ma rụọ ọrụ nke ọma.
AHỤRỤ NDỊ NA-ECHI AKWỤKWỌ ụbọchị 14:
Ga-eri nri keto dabere na iji kwado ma melite metabolism gị. Fọdụ n'ime uru iji ụbọchị iri na anọ a bụ:
- Ahụ onye ọrụ ga-ere ọkụ glucose dị na carbohydrates n'ụzọ dị irè. Nke a na-enye imeju ohere ịmalite usoro nke imepụta ketones ọhụrụ.
- Akụkụ abụba homonụ aka gị nke cortisol ga-amalite ịda.
- Ọkpụkpụ aka gị nke ọma (nke a bụ ọrụ maka metabolism gị)
- energybawanye ume
- Ọ dịghị ihe ọzọ na-eme na-enweghị ike ilekwasị anya
- Ọganihu nke ogo insulin nke ga - eduga n'ọkwa abụba dị ala n'ahụ
- Usoro ihe eji eme keto a enweghi keto flu nke ndi omenaala na-eri. Ga-enwe ike ịnụ ụtọ mgbanwe ọhụrụ dị n'ahụ gị na -enweghị “mmetụta dị egwu”
- The nri na-enye ohere ahụ iji gbanwee abụba echekwara na ike. Mbibi nke abụba agaghị agabiga usoro ketosis.
- daybọchị iri na anọ keto nri na-enye gị ohere iri ma rie nri kachasị amasị gị. Ikwesighi igbochi onwe gị iri nri dị elu mgbe ahụ gị dị na usoro mmepụta nke ketone.
GỊNỊ mere ị ga - eji nweta akara ụbọchị 14:
Nri iri nri 14 a na-enye ọtụtụ uru na obere oge. Okwesighi ka ekwuata gi na nri keto na ndu. Ụfọdụ n'ime ihe ndị mere ị ga - eji kpebie iji nri a mee ihe ka mma maka ya bụ:
- You ga-enwe ike ịnweta ọ sourcesụ protein kachasị amasị gị ma ọ bụrụhaala na ị họrọ anụ nke kwesịrị ekwesị.
- I nwere ike iri nri ọkacha mmasị gị kachasị amasị gị ma ọ bụrụhaala na ị gụnyere "keto carbs". Nke a gụnyere iri mkpụrụ osisi! Otú ọ dị, ị ga-achọ ịma oge kwesịrị ekwesị iji rie nri ndị a iji meziwanye ike gị na-ere ọkụ nke bụ ihe ihe nkuzi a na-ekpuchi.
- Atụmatụ a dabere na keto ụbọchị iri na anọ enweghị mmetụta dị ogologo oge nke ga - egbochi ike gị. Nke a dị iche na nri ọdịnala keto nke nwere ọtụtụ ọghọm.
- Atụmatụ a ga - enyere gị aka ịkpụ ahụ ike
- Younwere ike ibudata ntuziaka a ozugbo ọ dị na PDF ka ị nwee ike ịmalite ozugbo
- nwere ike ịnụ ụtọ ihe ọ alcoụ alcoụ na-amasị gị na-aba n'anya site na ịzere mmanya na-aba n'anya nke na-eme ka nchekwa abụba dị ukwuu ma nwee oke shuga. Daybọchị iri na anọ a na-eme atụmatụ ị whichụ mmanya na-aba n'anya ị nwere ike ị drinkụ
- Mfe iji ruru ya “ezubere iche keto obibia”
- You nwere ike ịnụ ụtọ ọkacha mmasị gị na-emeso otu ugboro n'izu na-enweghị ịnweta abụba mgbe ị ghọtara nke ọma otu ụzọ a zubere iji rụọ ọrụ n'ezie
- Atụmatụ a dị mfe ịgbaso ogologo oge ma ọ gụnyere mineral, nri, na akụrụngwa nke na-egbochi adịghị ike nkịtị na nri keto.
- Ọ bụrụ na ị bụghị afọ ojuju n’ụzọ ọ bụla nke a 14 Chama Aka abịa nke a zuru 60 ụbọchị ego azụ nkwa otú i nwere ihe ọ bụla ida!
Anyị na-eche na atụmatụ a dị mma ma ọ bụ nhọrọ kacha mma maka ahụ gị ogologo oge. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ na ị ga-aga n'oge ọ bụla, jide n'aka na lelee ihe a 14 Day Keto Challenge nke mbụ n'ihi na ọ na-abịa na obere ihe ize ndụ ma ka na-ekwe nkwa nsonaazụ! Ọ bụrụ na ị nye iwu taa, ị ga - enweta 4 onyinye onyinye ego na usoro gị! You'll ga-enweta akwụkwọ ntanetị ego 4 nke gụnyere usoro mmega ahụ, nri nri na hacks, akwụkwọ ntuziaka aghụghọ, yana usoro eji ebu ọnụ na-ebu ọnụ.